ပရိုမိုးရှငျး YuKi Japanese Restaurant not use
ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာပဲနေပြီး ဂျပန်အငွေ့အသက်၊ ဂျပန်ရိုးရာအစားသောက်တွေနဲ့ ဂျပန်ရောက်သွားသလို ခံစားရစေမဲ့ YuKi Restaurant မှာ All Menu 10% နဲ့သွားရာက်သုံးဆောင်နိုင်မဲ့အခွင့်ရေး…
ကိုယ်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးလေးတွေကတော့ ဆိုင်ရဲ့ Decorationလေးနဲ့ ဂျပန်အစားအ စာလေးတွေက ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းပါတယ်.. ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လေးနဲ့ Fresh ဖြစ်သွားစေမဲ့ အပြင် အခင်းကျင်းလေးတွေ ကမိုက်တော့ အစားသောက်လေးတွေစားရင်း ဓာတ်ကောင်းကောင်းဖမ်းလို့ရမဲ့ နေရာတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး.... YuKi ကတစ်ယောက်ထိုင်ခုံလေးတွေပါ ပြင်ဆင်ပေးထားတော့ အပေါင်းသင်းတွေမပါလို့ ၊ FA သမားတွေ ဖြစ်နေလို့လည်းစိတ်ပူစရာမလိုဘူးနော် …
Yuki ရဲ့ဂျပန်အစားစာကို စားလိုက်တာနဲ့ ဂျပန်ရောက်သွားသလိုခံစားရစေမဲ့ အရသာမျိုး….
Ramen လား ? Sushi လား ? Tempura လား ? Sashimi လား? Bento Boxလား? Menu အစုံအလင်နဲ့ Yuki Janpanse Restaurant မှာအစုံပဲ.. Menu လေးတွေအကုန်ထဲကမှ …Ramen ရဲ့ Collection ထဲကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် အစပ်အရသာလေးကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Foodie လေးတွေအတွက် Spicy Beef Ramen, ကိုရီးယားအသဲလေးတွေအတွက် Kimchi Chicken Ramen, ပင်လယ်စာ ချစ်သူလေးတွေအတွက် ကတော့ Seafood Ramenတွေအပြင် Salmon Sashimi လား ? Tuna Sashimi လား ? Hamachi Sashimi လား? Sashimi ဆာရှိမိမှာ ပရိုတိန်းဓာတ်၊ Vitamin B6 နဲ့ B12 အပါအဝင် တခြားအာဟာရဓာတ်တွေလည်း အများကြီးပါတယ်။ အစားတစ်လိုင်းတွေအတွက် ဒီလိုကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဆာရှိမိတွေကို YuKi မှာစားလို့ ရနေပြီနော်….
Bento Box ထဲကပြောရမယ်ဆိုရင် Lunch Sets ပုံစံလေးတွေ (Chicken, Grilled Salmon , Grilled saba, Sushi, Sashimi ) စသဖြင့်တို့ ကြိုက်နှစ်သက်တာလေးကိုရွေးချယ်စားနိုင်ပြီး စားလို့ကကောင်း၊ အဟာရလည်းရှိ၊ ဈေးနူန်းလည်းသင့်တာမို့ Yuki လေးရောက်ခဲ့ရင် မဖြစ်မနေစားခဲ့ဖို့ တိုက်တွန်းပေးပါရစေ.
YuKi Japanese Restaurant လိပ်စာလေးကတော့
No. (69), 11 ward, Innyalay, 6.5 Miles, Pyay Road, 6.5 Mile Market Place, Yangon.
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် - 10 AM to 10 PM
YuKi Restaurant ရဲ့ Promotions ကြီးကိုရယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ B&F Weekly Promotions Mobile App ရဲ့YuKi Restaurant စာမျက်နှာက Use Now ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး ကျလာတဲ့ Success စာမျက်နှာကို Bill မရှင်းမီ ပြလိုက်ရုံနဲ့တင် Promotions ကြီးကို ခံစားနိုင်မှာပါ။ B&F Weekly Promotions ရဲ့ Coupon လေးတွေရှိရင်လည်း Coupon လေးနဲ့ Discount ရယူနိုင်ပါတယ်နော် …
YuKi Japanese Restaurant not use ဆိုငျ
No.69, 11 Ward, Innya Lay, 6.5 Miles (MarketPlace), Pay Road,Yangon
ဖုနျးနံပါတျ : 09455820720